Ciidamada dawlada & Kuwa AMISOM oo la Wareegay Meelihii laga Godoomiyay Xudur. |
Ciidamada dawlada & Kuwa AMISOM oo la Wareegay Meelihii laga Godoomiyay Xudur.
Deegaanka Abad-Beedey ayaa marin u ahaa sahayda gasha Xudur, gaar ahaan gaadiidka badeecadaha ganacsi sida, iyadoo saraakiil ka tirsan dowladda ay sheegeen in deegaankan ay horay Al-Shabaab ka go’doomiyeen degmada Xudur, markii gaadiid fara badan oo badeecado ganacsi u sida ay ku qabteen deegaankaas.
Taliyaha Ciidamada Milateriga qeybta Gobolka Bakool Col. C/raxmaan Tima Cade ayaa sheegay in Al-Shabaab ay deegaankaas ku heysteen gaadiid ganacsi, isla markaana ay cunaqabateeyeen degmada Xudur.
Waxaa uu sheegay in qorshahooda yahay sidii ay u furi lahaayeen wadooyinka ay jidgooyooyinka dhigteen Al-Shabaab ee ay u diideen in gaadiidka shixnadaha ganacsi ay gaaraan deegaanada ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Howl galkan oo ay ka qeyb qaateen Ciidamada Itoobiya ayaa ka dambeeyay markii in muddo ah degmada Xudur ay aheyd mid go’doonsan, isla markaana laga jaray wadooyinkii sahayda u soo marayay, taasoo keentay in sare u kac uu ku yimaado qiimaha raashinka qutul daruuriga degmada Xudur.